Photography Services Kutengesa uye Kubhadhara muUnited States
Photography Services in New York City
Rakabudiswa na jenny davis
maonero Photography Services Rakabudiswa 3 years ago
Kutora mifananidzo isayenzi, hunyanzvi, kushandiswa uye maitiro ekugadzira mifananidzo yakasimba nekurekesa mwenje kana imwe magetsi emagetsi, kungave nehunyanzvi nenzira yemagetsi sensor, kana makemikari kuburikidza nechinhu chinotaridzika seyakajeka semufananidzo wemufirimu.  Kazhinji, lenzi inoshandiswa kutarisisa mwenje unoratidzwa kana kubviswa kubva kuzvinhu kuva chifananidzo chaicho pane yakajeka-yakajeka nzvimbo mukati mekamera panguva yekuratidzwa kwenguva. Iine yemagetsi mufananidzo sensor, izvi zvinoburitsa magetsi emagetsi pixel yega yega, iyo inogadziriswa nemagetsi uye inochengeterwa mune yemadhijitari faira yemufananidzo wekuteedzera kuratidzwa kana kufambiswa. Mhedzisiro ine mapikicha emulsion mufananidzo usingaonekwe wechinyakare, uyo unogadziriswa "kuverengerwa" kumufananidzo unooneka, ungave wakashata kana wakanaka zvichienderana nechinangwa chemifananidzo nezvinhu nzira yekugadzirisa. Mufananidzo wakashata pane firimu mutsika unoshandiswa kuita mapikicha kugadzira mufananidzo wakanaka pachigadziko chemapepa, chinozivikanwa sekudhindwa, kungave kuchishandiswa kukurukura kana kudhinda. Photography inoshandirwa muminda yakawanda yesainzi, kugadzira (semuenzaniso, Photolithography), uye bhizinesi, pamwe nekushandisa kwayo zvakananga kuita zvehunyanzvi, firimu uye vhidhiyo kugadzira, nhandaro, hobby, uye kutaurirana kwakawanda.